Madaxweynaha dowlada Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo tegay Garoowe
Garoowe:-Madaxweynaha dowlada Federaalka Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada Garoowe ee xarunta dowladda Puntland. Wafdiga Madaxweynaha Madaxweynaha dowlada Federaalka Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa ka soo degay Garoonka diyaaradaha ee Garoowe oo maalinta beri ah la furi doono ka dib markii ay dhamaystiran tay dhamaan dhismihii ka socday Garoonka in mudo ah.
Wafdiga Madaxweynaha dowlada Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa intii ay joogaan Garoowe waxaa ay ka qayb gali doonaa Sanadguuradii 4-aad ee ka soo wareegatay markii Madaxweynaha dowalada Puntlad oo loo doortay xilka madaxweynanimada Puntland oo ku beegan 8 Janaayo.
Dhinac kale Madaxweynaha dowlada Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxaa la filayaa in safar ku tego magaalada qardho e xarunta Gobolka Karkaar waxaan uu booqan doonaa Boqor Burhaan Boqor Muuse ka dibna waxaa u safarkiisa ugu gudbi doonaa magaalada Boosaaso ee xarunta Gobolka Bari.
Safarka Madaxweynaha dowlada Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxaa uu noqonayaa safarkii ugu horeeyey ee ku yimaado Puntland ilaa iyo intii loo doortay xilka Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya